सामाजिक सञ्जाल, जहाँ फरक मतलाई निषेध छ !
ब्लग सविना देवकोटा
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका उच्चतम् डिजिटल मञ्च बनेका सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय फरक विचारलाई सिध्याउने अस्त्र बनेका छन्। कतै यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास र आचारव्यवहारमै त प्रहार गरिरहेको छैन ?
कोरोना विरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमा अत्यासलाग्दो गरी बढ्दैछ मानसिक तनाव
कोरोना कहरमा ज्यानको बाजी राखेर अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमणको डरसँगै अन्य मनोसामाजिक तथा व्यावसायिक जोखिमका कारण मानसिक तनाव चुलिंदो छ।
तेजाब पीडितहरुका सारथिः एउटा मान्छेको साथले फरक पार्दछ जिन्दगीमा...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको १२ असोजमा तेजाब बेचबिखनलाई नियमन गर्ने र आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेपछि भारतबाट अमिताभ बच्चनले फोन गरेर उज्ज्वलविक्रम थापालाई बधाई दिए। उज्ज्वलका लागि त्यो बिर्सिनसक्नुको दिन भयो।
योनी चियाउँदा देखिएको कुरुप समाज योनी चियाउँदा देखिएको समाज वास्तवमै ‘भयानक’ छ। स्वयम् आफ्नो मात्रै नभएर सम्पूर्ण परिवार/समाजकै इज्जतको भारी बोकेर दोब्रिएको उल्टो त्रिभुजाकारको योनी समाजको कुरुप अनुहार उतार्न पर्याप्त छ।
कोरोना संक्रमणको डरले नै बिरामी हुनथाले बालबालिका कोरोनाको डरले घरभित्रै सीमित हुनुपर्दा बालबालिकामा मनोसामाजिक विचलन देखापर्न थालेको छ। कतिपय बालबालिका कोरोना संक्रमणको भयले नै बिरामी पर्न थालेका छन्।
प्रेम र युद्धको लय लोग्ने नहुनुको पीडा स्वास्नीलाई, छोरो नहुनुको पीडा बाआमालाई जति हुन्छ, एउटा नागरिक नहुनुको पीडा देशलाई हुन्छ कि हुँदैन?
हाललाई छुन मनाही छ ! साँच्चै, भेटेरै एक प्रेमिल अँगालो मार्न चाहन्छौं भने, सधैं यो हृदयको धड्कन चाल पाइरहन चाहन्छौं भने अनि सधैं छोइरहन चाहन्छौं भने भन्नु छ— हाललाई, छुन मनाही छ !
बेवास्तामा ‘महीनावारी बन्द’, जोखिममा महिला स्वास्थ्य महिला जीवनको महत्वपूर्ण चरण महीनावारी बन्द (रजोनिवृत्ति) बारे चौतर्फी बेवास्ताले महिला स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरसँगै दाम्पत्य जीवन नै जोखिममा पारिरहेको छ।
यसरी भइरहेछ सीमापारबाट 'साइबर रेप' सामाजिक सञ्जाल मार्फत अनेक प्रलोभन देखाउँदै अश्लील तस्वीर र भिडियो मार्फत भइरहेको ‘ब्ल्याकमेल’ बाट पीडित नेपाली महिलाले कमजोर कानूनी प्रावधान र कूटनीतिक सम्बन्धका कारण न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्।
दृष्टिविहीन भएकै कारण उनले भोग्नुपरेका अपमान, तिरस्कार र त्यसबाट बच्न उनले गरेका संघर्षसँगै आत्मसम्मान खोजीको उनको यात्रा समेटिएको पुस्तक रोचक छ ।
नेवाः संस्कृतिको शक्ति
पटक–पटक सत्तालाई झुकाउन मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनकै दिशा बदल्न समेत निर्णायक बन्दै आएका काठमाडौं उपत्यकावासी नेवार समुदायको शक्तिको आधार बनेको छ– नेपाली मौलिक पहिचान बनिसकेको नेवाः संस्कृतिको वैभव।
लेप्चा भाषाको शब्द ‘फातसुङ’ को अर्थ हुन्छ, माटोको कथा । यो आख्यानले कुनै बेला राजनीतिक स्वार्थको मैदान बनेको एउटा भूगोलको मार्मिक कथा लिपिबद्ध गरेको छ।
यस्तै विविध प्रश्न, अन्तक्र्रिया र भावनात्मक परिवेशकाबीच ललितपुरको जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजको प्राङ्गणमा ‘१४ युद्धका कथाहरु’ शीर्षकमा फोटोकथा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
बाल भिटा जस्ता पोषणयुक्त आहार नेपालमा अव्यावहारिक सावित भइसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्ता पुरिया वितरणको कार्यक्रम जारी राखेको छ।
बाल यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध ‘सेफ्टी पोर्टल’
समाचार सविना देवकोटा
इन्टरनेटमा रहेका बाल यौन दुर्व्यवहारजन्य सामग्री कम गर्न www.childsafety.org.np सञ्चालनमा आएको छ।
‘छुटेका अनुहार’ मा भेटिने अनुहार
कफी खान नजानेर मुख पोलेको चार वर्षपछि कफी बेच्ने काम शुरु गरेका लेखक सायनले मालिक र मजदूरको मनोविज्ञान पनि खुलस्त रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
२९ पुस आइतबार। रामेश्वरी भेटवाल (४७) घरमा लुगा धुँदै थिइन्। काठमाडौं बालुवाटारस्थित महेन्द्र राष्ट्रिय माविमा अध्यापनरत भेटवाललाई भेट्न सोही विद्यालयमा निजी स्रोतमा नियुक्त एक शिक्षक हातमा चिठीसहित आइपुगे। पत्रमा उनको अस्थायी नियुक्ति म्याद थप नगर्ने निर्णयको व्यहोरा थियो। पत्र पढेर उनी अचम्मित भइन्।
बढी लेखिने र कम पढिने विधा मानिने कविताले पछिल्लो समय प्रभावशाली प्रस्तुति कलाका कारण पाठकको दायरा फैलाउने मौका पाएको छ ।
‘होम केयर’ सेवाका कारण एकातिर शहरी ज्येष्ठ नागरिकहरूले स्याहार पाउन सकेका छन् भने अर्कोतिर नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा नयाँ उद्यम फस्टाउँदो छ।
शिल्पी थिएटरमा हाक्पारे भाका
पूर्वी नेपालको पहाडी भेगमा लिम्बू समुदायमाझ प्रचलित भाका हाक्पारे २४ पुसमा काठमाडौंको शिल्पी थिएटरमा रैथाने संगीत समूहले प्रस्तुत गरेको छ। कार्यक्रममा गायनसँगै हाक्पारेसम्बन्धी शोध पनि प्रस्तुत गरियो।
मोबाइल र इन्टरनेटले बढाउँदैछ मानसिक रोगी
अधिकांश समय स्मार्टफोन र इन्टरनेटमा लिप्त डिजिटल पुस्तामा मनोसामाजिक असन्तुलन बढ्दै गएको छ।
आन्तरिक परीक्षाको नाममा निजी विद्यालयको व्यापार
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीमाथि पुनः परीक्षाका नाममा अतिरिक्त शुल्कको बोझ बोकाइरहेका छन्।
फरक-फरक सामाजिक-आर्थिक परिवेशमा हुर्कंदै गरेका ग्रामीण बालबालिकाहरूमा आत्मविश्वास भर्न परिवेश सुहाउँदो पाठ्यक्रम, शिक्षक र शिक्षण पद्धति निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
पुस्तक समीक्षा- जात्रामा जीवन्त संस्कृति
गीत-संगीत, नृत्य, पर्व र जात्राले समुदायलाई समृद्ध बनाएका हुन्छन्। अनगिन्ती नाचगान र जात्राले समृद्ध नेवार समुदायमा अनेकौं मौलिक जात्रा छन्, जसमध्ये केही जात्रालाई समेटेर फोटो पत्रकारद्वय रेखा शाक्य र शरण डंगोलले जीवन्त संस्कृतिहरू पुस्तक तयार पारेका छन्।
टिच फर नेपालः विश्वले हेरेको परिवर्तन
समुदाय र विद्यार्थीसँग घुलमिल भएर दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने टिच फर नेपाल को शैक्षिक अभियान विश्वसामु अनुकरणीय सावित भएको छ।
दशैं लगायत चाडबाडमा अधिकांश नेपाली महिलाको भूमिका आफूलाई बिर्सेर परिवारका सदस्य र पाहुनापाछालाई खुशी पार्न सीमित हुने गर्छ। पुरुषहरू भेटघाट, घुमघाम र रमाइलोमा भुल्दै गर्दा अधिकांश महिला दशैंमा जुठा भाँडा मस्काइरहेका हुन्छन् । केटाकेटीहरू नयाँ लुगा एक–अर्कालाई देखाउँदै उफ्रिरहँदा घरमा आमा, काकी, दिदीहरूलाई भने परपाहुनाको व्यवस्थापन गर्न भ्याईनभ्याई हुन्छ ।
दशैंमा फस्टाएको फुटपाथ बजार
मोलमोलाई गरिरहनु नपर्ने र सस्तो पनि पर्ने भएकाले फुटपाथका पसलहरु ग्राहकका लागि आकर्षक रोजाइ बनेका छन् ।
स्वाभाविक यौन जिज्ञासा र मनोविज्ञानलाई अभिभावक, शिक्षक, समाज र नीतिगत संरचनाले सम्बोधन नगर्दा बालबालिकाहरू मानसिक प्रताडना र कानूनी सजायको शिकार भइरहेका छन् ।
अमेरिकामा इञ्जिनियरिङ पढेर पनि आयुर्वेदको अध्ययनमा लागेकी श्वेताको कम्पनीले स्वदेशी जडीबुटीको प्रयोगबाट सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री बनाइरहेको छ ।